Tamotamo + diloilo kôkô : mahafotsy botsiaka ny nify
Isan’ny miteraka fifaliana ny mahita tsiky mamiratra, ravahan’ny nify fotsy botsiaka. Noho ny antony maro samihafa anefa dia misy ihany no manana nify tsy toy izay, fa na izany somary mavomavo na matro-doko. Mba hananana nify fotsy mangatsakatsaka ary dia ampiasao ny tamotamo hanadiovana azy !
- Vovoka tamotamo : 1sk
- Diloilo kôkô tsy mifangaro 1sf
Afangaro ny diloilo kôkô sy ny tamotamo, tsy mijanona raha tsy mahazo paty malama tsara. Angalana kely ny paty azo teo atao amin’ny borosinify ary ikosehana ny nify mandritra ny 2 mn. Atao intelo isan’andro.
Betsaka mpanala arafesina (antioxidant) miady amin’ny mikraoba sy bakteria, manala fanaintainana ary indrindra mahasalama ny ati-vava ny tamotamo. Araka izany dia miady amin’ny olimanara sy ny fivontosan’ny hihy ary ny fanaintainan’ny nify izy. Mamotsy sy manamafy ny nify ihany koa izy. Ny diloilo kôkô koa kosa dia manamafy io ady amin’ny bakteria io ary manala ireo tainify manamavo sy manamatroka ny nify.